AMANYATHELO EKUFUNEKA ELANDELWE EMVA KOKUCOCWA KOMZIMBA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
Amanyathelo ekufuneka elandelwe emva kokuCoca iBhunga
Itekhnoloji I-BSNL isusa iiNtlawulo zoFakelo kwiiNxibelelwano zeBhanti yeXesha elide
Iindaba I-Kumbh mela ebuyayo inokuthi inyuse ubhubhane we-COVID-19: Sanjay Raut
Imidlalo I-IPL 2021: iBalleBaazi.com yamkela ixesha lephulo elitsha 'Cricket Machao'
Ekhaya Ubuhle Ukunyamekelwa komzimba Ukhathalelo lomzimba oi-Abasebenzi Ngu UAsha Das | Ipapashwe: NgoLwesine, uMeyi 9, 2013, 4:04 [IST]
Ukupholisha umzimba lonyango lobuhle olwafumana ukuthandwa ngenxa yeziphumo zalo ezimangalisayo. Ukupholiswa komzimba ikakhulu kubandakanya ukukhutshwa kolusu olufileyo kunye nokuthambisa umzimba. Isiphumo ngokuqinisekileyo siya kuba mnandi kuwe, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthatha unonophelo olongezelelekileyo kulusu lwakho emva kokunyanga unyango lokucoca umzimba. Oku kubalulekile ukuthintela nasiphi na isiphumo esibi kulusu lwakho kunye nokugcina isiphumo sokucoca umzimba ixesha elide.
singasela incindi yesitshixo sebhanana yonke imihla
Nazi ezinye zeengcebiso ezibalulekileyo zokhathalelo lwasemva eziza kukunceda ugcine ulusu lwakho luthambile kwaye luqaqambile emva konyango lokucoca umzimba.
Shiya ulusu lwakho lukhululekile : Musa ukuzama ukwenza enye into kulusu lwakho emva kokucoca umzimba. Vumela ulusu lwakho lubambe zonke izibonelelo zonyango ukuze lunike ukusebenza kwalo ngokupheleleyo. Iikhemikhali zinokuchaphazela ulusu lwakho ngokulula emva kokukhutshwa.
Bukela naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga Kubalulekile ukujonga ukuba ngaba ufumana naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga emva konyango lokucoca umzimba. Kungcono ukusebenzisa iimveliso zendalo zenkqubo. Kodwa, ukuba usebenzisa iimveliso zeekhemikhali, qiniseka ukuba awufumani ziphumo zingathandekiyo kuyo.
Ukukhupha : Ukukhupha ulusu olufileyo lelona nyathelo libalulekileyo ekupoliseni umzimba. Kodwa ungayeki apho. Kubaluleke kakhulu ukwenza ukukhutshwa komzimba ngeentsuku ezithile emva kokucoca umzimba ukuze ugcine ulusu lwakho lutsha kwaye likhazimla.
Hlala ngaphandle elangeni : Ulusu lwakho luyaphuphuma kwaye oku kuyakwenza ulusu lwakho luthambekele ngakumbi ekutshisweni lilanga. Imitha ye-UV yomelele ngokwaneleyo ukuba ingonakalisa ulusu lwakho. Kubaluleke kakhulu ukunqanda ukukhanya okuthe ngqo elangeni emva nje kokuba kwenziwe unyango lokucoca umzimba.
Sebenzisa i-sunscreen Kuba ulusu lwakho kufuneka lukhuseleke elangeni, kuhlala kucetyiswa ukuba uthambise i-sunscreen ukuba awunakukuthintela ukuba selangeni ngaso nasiphi na isizathu. Faka isicelo kwakhona kwiscreen selanga amaxesha amaninzi ukugcina isiphumo sokukhusela ilanga.
Sukusebenzisa izithambiso ezomeleleyo : Shiya isikhumba sakho sikhululekile ukuba siphefumle emva kokucoca umzimba. Ukufaka isicelo kwizithambiso ezomeleleyo kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezingafunekiyo ngenxa yeekhemikhali ezikhoyo kuzo.
Gwema isepha Ayikhuthazwa into yokuba usebenzise iisepha ezinzima emva kokucoca umzimba. Oku kuya kwenza ukuba ulusu lwakho lome oluya kususa umphumo wokufuma komzimba wokucoca.
indlela yokwenza umsonto wemilebe ephezulu ekhaya
Lawa ngamanyathelo athile ekufuneka elandelwe emva konyango lokucoca umzimba. Ndiyathemba ukuba uza kuzifumana ziluncedo.
isishwankathelo sothando lunokwenzeka kabini
Unyango lwasekhaya lokuphazamiseka kubuthongo kubantu abadala
indlela yokuphilisa isilonda esiswini ngokwemvelo
iindawo zokucoca i-asidi kunye negesi
zingaphi i-surya namaskar ekufuneka sizenzile